SONSAF | Su,aalo sida badan la iswediiyo
Halkaan ayaad timid: Home » SONSAF » Annaga » Su,aalo sida badan la iswediiyo
Waa maxay waxa SONSAF laga soo gaabshay?
SONSAF waxay u taagan tahay ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn ee Somaliland.
Maxay qabataa SONSAF?
SONSAF waxaa ogolaansho loo siiyay xoojinta ka qeygaleyaasha aan dowliga ahayn ee Somaliland si ay ugu howlaan siyaasada wada hadalka caalamiga ah iyo dajinta go,aamada.
SONSAF ma ahan urur deeq lacageed bixiya mana qeybiyo wax qarash ah ama cawimaad toos ah.
Waa maxay ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn?
Waa maxay sababta ay SONSAF ugu howsho siyaasada wada hadalka?
Siyaasada wada hadalku waxay ku saabsan tahay in si wada jir ah xal loogu helo dhibaatooyinka bulshada taasoo ku dhisan wada tashi. Ururka SONSAF wuxuu ka shaqeeyaa wada hadalka siyaasada ee lala leeyahay dowlada Somaliland iyo beesha caalamka si loo hubiyo in bulshada Somaliland ay codkeeda ka dhiibato go,aamada saameyn doona mustaqbalkooda.
Waa maxay sababta ay tahay in dadka dajiya siyaasada ay u dhagaystaan Somaliland?
Waa ujeedo ka go,an dowlada iyo deeq bixiyeyaasha in ay ka shaqeeyaan danaha dadka Soomaaliland.
Xubnaha ururkeenu waxay ogsoon yihiin xaalada wadanka ka jirta iyo waxa dadku u baahan yihiin oo ay hiigsanayaan maadaam aanu xidhiidh toos ah la leenahay.
Waxaa meeqaamkeenu yahay in aan soo bandhigno aaraada, waxyaabaha dadku daneeyo iyo waxa ay ahmiyada siiyaan marka nolosha laga eego dhan kasta Somaliland gudaheeda.
Waa maxay faaiidooyinka laga helo xubin ka noqoshada SONSAF?
Hadii aad xubin ka noqoto SONSAF, waxaad awood u yeelaneysaa sare u qaadida aaraada, waxa bulshadaadu danayso iyo waxa ay ahmiyada siiso. Maadaama ay ku howlayaan siyaasada wada hadalka, xubnaha SONSAF waxay awood u leeyihiin wax ka badalida hannaanka dajinta go,aamada saameeya nolosha dhammaan dadka Somaliland.
Sidee ugu soo biiri karaa SONSAF?
Ayada oo la isu keenayo qeybo badan oo ah ka qeyb galeyaal aan dowli ahayn oo ku hadlaya hal cod oo arin kusaabsan ayaa SONSAF waxay mudnaan la jamciyay siisaa dadka aan weligood codkooda laga maqli lahayn heerka siyaasadeed.
SONSAF waxay xidhiidh fiican la yeelatay hayadaha qaranka iyo beesha caalamka waxayna door isku xidh oo muhiim ah ka ciyaartaa ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn iyo dadka dajiya go,aamada.
SONSAF waxaa maal galiya Midowga Yurub iyo DFID, waxaana kharashka maal galinta maamusha Saferworld.
SONSAF mana maal galin kartaa anaga?
SONSAF maba ahan urur wax maal galiya mana bixiso kharash iyo cawimaad toos ah midna.
Waa maxay doorka Saferworld ka ciyaarto taageerida SONSAF?
Saferworld waxay ka taageertaa fagaareyaasha ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn xagga far samada, siyaasada iyo la talinta.
Saferworld waxay isku duba ridaa shirarka ka dhexeeya ka qeybgaleyaasha aan dowliga ahayn iyo beesha caalamka waxayna maareysaa qarashka laga helo Guddiga Midowga Yurub iyo DFID.
Hadii jawaabaha su,aalahaagu aysan kujirin halkan kore waxaad si toos ah nagala soo xidhiidhi kartaa: info@sonsaf.org